Xiddiga reer Holland oo diiday in funaanadiisa lagu qoro magaca Caa’ilada ee van Dijk… – Hagaag.com
Posted on 8 Oktoobar 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Xiddiga reer Holland Virgil van Dijk ayaa ah ciyaaryahanka ugu fiican Yurub iyo sidoo kale daafaca ugu fiican adduunka.
Dhibaatadii Virgil uu ku soo koray kama dhigin mid qalbi jaba, laakiin waxay kordhisay awoodiisa waxayna ka dhigtay inuu si deg deg ah u fuulo jaranjarada caannimada kubada cagta, asaga oo ka soo bilaabay kooxdii ​​Groningen (2011-2013), Celtic (2013-2015) iyo Southampton (2015-2018) ilaa uu gaaro Liverpool, oo kula guuleysatay horyaallada Yurub ee Champions League, Iyo European Super Cup.
Haddii aan ku laabano sheekada Virgil oo diiday inuu xirto funaanad lagu qoro magaca caa’iladiisa, sida Abtiga Van Dijk uu u sheegay saxaafadda Ingiriiska in aabihiis uusan joogin xilliyadii muhiimka ahaa ee noloshiisa kubada cagta, isla markaana uusan la soo xiriirin, wuxuu ku daray Ron van Dijk wuxuu ahaa nin wanaagsan laakin wuxuu ahaa aabe xun.
“Mar labaad ayuu guursaday xaaskiisii ​​labaadna waxay ahayd mid madaxa ka heysata oo xataa waxay ka hor istaagtay inuu arko carruurtiisa. sidaasi ayuu raaciyey Abtiga.
Virgil Abtigiisa ayaa wuxuu sharraxayaa sida hooyadooda ay ugu hurtay nolosheeda caruurteeda seddaxda ah oo ay ilowday nafteeda, waxay u taagneyd waxbarashada iyo korinta caruurteeda iyo in ay u dhafartay si ay ilmaheeda u raaxeystaan.
In kasta oo Virgil uu diyaar u yahay inuu aabihiis iska cafiyo ficilladiisa, haddana kabtanka Holland wuxuu hubaa in ficilladii aabihiis ay burburiyeen qoyska.
Aabaha ayaa soo noqday asaga oo fiirinaya lacagta, sida uu sheegay Abtiga Virgil, laakiin Ron van Dijk ayaa ku jawaabay: “Isaga keligii ayaa ah qofka garanayay waxa ka dhigay Virgil oo gaarsiiyey heerkaasi. Cidna dan kama gelin xirfadiisa kubad ciyaarida dhinaca qoyska hooyadii ilaa uu ka noqday ciyaaryahan xirfadle ah.”
Laakiin caddeynta aabaha ayaa ka soo daahday waqtiga Virgil sidaa darteed “wuu ka barri noqday” aabihii isaga oo iska sii wata caannimda kubada cagta iyo noloshiisii shaqsiyadeed ee uu la leeyahay xaaskiisa iyo gabadhiisa.